Ungaguqula kanjani i-PDF ibe yiZwi: Zonke Izindlela | Izindaba zamagajethi
Ungayiguqula kanjani i-PDF ibe yiZwi
U-Eder Esteban | | General, Izifundiswa
I-PDF yifomethi esisebenza ngayo njalo kukhompyutha. Noma ezikhathini eziningi kufanele senze eminye imisebenzi, ngaphezu kokuyivula. Okuthile okujwayeleke kakhulu ukuthi sifuna ukukuguqula kube amanye amafomethi ahlukile. Phambilini sesiyibonile indlela eya iguqule ifomethi yeJPG. Yize kunjalo kuleli cala sisendleleni esingayiguqula ngayo ibe yincwadi yeZwi.
Sine uchungechunge lwezinketho ezitholakalayo ezisivumelayo guqula ifayela le-PDF libe yidokhumenti ye-Word Ngendlela elula. Kuyindaba yokukhetha indlela evumelana kangcono nawe esimweni ngasinye. Kepha uzokwazi ukubona ukuthi bonke bazohlangabezana nenhloso yokuyiguqula ibe yileyo ndlela.
1 Amakhasi wewebhu ukuguqula i-PDF ibe yi-Word
2 -Google Docs
3 Ku-Adobe Acrobat
Amakhasi wewebhu ukuguqula i-PDF ibe yi-Word
Njengenjwayelo, sithola okuhlukahlukene amakhasi wewebhu lapho sivunyelwe ukuguqula ifayela le-PDF ngezindlela ezahlukahlukene. Phakathi kwamafomethi lapho singaguqula khona ifayela sithola iZwi, kungaba .doc noma .docx. Ngakho-ke, kuyindlela elula uma kufanele sifeze le nqubo esimweni esithile. Njengoba ukusebenza kwalolu hlobo lwekhasi lewebhu akunazinkinga eziningi kakhulu.
Ukuphela kokufanele ukwenze ukulayisha ifayela le-PDF elikulo futhi bese ukhetha ifomethi ofuna ukuyithola. Ngemuva kwalokho, iwebhu izonakekela le nqubo futhi kufanele silande kuphela umqulu weZwi ekugcineni kwenqubo. Ngale ndlela, lapho-ke singasebenza nayo, uma kunesidingo. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Sithola amanye amakhasi akhona maqondana nalokhu, njenge:
Lawa makhasi ewebhu amathathu aziwa kahle kubasebenzisi abaningi. Ukusebenza yilokho esikuchazile ngaphambili, ngakho-ke ngeke ube nezinkinga lapho uwasebenzisa. Ngale ndlela, usebenzisa amakhasi wewebhu ashiwo, uzoba nedokhumenti ye-Word ozosebenza ngayo ngokunethezeka kakhulu-ke kukhompyutha. Amaningi ala makhasi ewebhu nawo asetshenziswa uma ufuna ukunciphisa usayizi wefayela le-PDF.
Ngaphakathi ku-Google Drayivu sithola i-Google Amadokhumenti, ongumhleli wedokhumenti yamafu. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, futhi ngokusinika ithuba lokuthi sisebenze kalula ngobuningi bamafomethi. Singayisebenzisa futhi lapho kufanele siguqule ifayela le-PDF libe yidokhumenti ye-Word. Le nqubo ilula ngempela ukuyenza.
Kufanele sivule iGoogle Drayivu kuqala bese silayisha ifayela lePDF esinesifiso sokuliguqula libe yifu kuleli cala. Uma sesikulayishile, kuzofanela uchofoze kwesokudla negundane elikulo fayela. Kusukela kokukhethwa kukho okuvela esikrinini, kufanele uchofoze "Vula nge" bese ukhetha ukuvula nge-Google Amadokhumenti. Ngale ndlela, leli fayela lizovulwa ngesihleli sedokhumenti se-Google efwini.
Lokhu kucabanga ukuthi sesivele sinefayela itholakala njengombhalo ohlelekayo. Ngakho-ke, uma ufuna ukwenza okuthile kokulungiswa kudokhumenti ye-PDF, sekuyisikhathi sokwenza manje. Njengoba kufana nokuthi ubusebenza kumbhalo oseZwini ngaleso sikhathi. Ngemuva kwalokho, uma ufuna ukulanda, kulula kakhulu.
Kufanele uchofoze kufayela, engxenyeni engenhla kwesokunxele kwesikrini. Imenyu yokuqukethwe enezinketho ezahlukahlukene izovela lapho. Enye yezinketho ohlwini ukulanda. Ngokuchofoza lapha, kuvela amafomethi amaningi ahlukene ngakwesokudla, kufaka phakathi ifomethi yedokhumenti ye-Word. Ngakho-ke, kufanele ukhethe leyo fomethi kuphela nefayela, okwakungu-PDF ekuqaleni, selivele lilandiwe njengeZwi. Inketho entofontofo ebuye isivumele ukuthi senze ukuguqulwa kufayela lelo ngasikhathi sinye.
Vele, izinhlelo zomqambi we-PDF zisinikeza nalokhu kungenzeka. Yize imvamisa kuyinto etholakala kuzinguqulo ezikhokhelwayo, okusho ukuthi akubona bonke abasebenzisi abazokwazi ukufinyelela lo msebenzi. Kepha, labo abanenguqulo ekhokhelwayo, lapho-ke bangayiguqula ibe yiZwi kalula.
Kufanele uvule ifayela le-PDF ofuna ukuliguqula ku-Acrobat. Lapho nje ifayela okukhulunywa ngalo livulekile, kuzofanela uchofoze lapho kunketho yokuthekelisa. Le nketho itholakala kuphaneli elungile lesikrini kudokhumenti. Ngemuva kwalokho, kusivumela ukuthi sikhethe ifomethi esifuna ukukhipha kuyo lelo fayela. Ngemuva kwalokho kufanele sikhethe ifomethi yeZwi njengeyona esifuna ukuyithola kuleli cala elithile.
Okulandelayo kufanele uchofoze ekuthumeleni, ukuze inqubo iqale. Ngemuva kwemizuzwana embalwa kuzophuma ukuthi sinefayela le- Umbhalo we-Word usuyatholakala ukulondolozwa kwikhompyutha yakho. Kumele sinikeze igama le-Word igama lelo, ngaphezu kokukhetha indawo esizoyigcina kuyo. Indlela elula futhi ukuyenza. Noma kukhawulelwe kubasebenzisi abanezinhlelo ezinjenge-Acrobat ezinhlokweni zayo ezikhokhelwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ungayiguqula kanjani i-PDF ibe yiZwi
Ungavala kanjani izinhlelo ezivulekile ku-Android
I-Sony Xperia 1: Ukuphela okusha okusha kukaSony manje sekusemthethweni